ऊर्जा मन्त्रीको मुख्य पहलमा रोल्पा यसै वर्ष यसरी बन्दैछ उज्यालो – रोल्पा समाचार
२०७७ भाद्र २७, शनिबार १५:५० गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ भाद्र २७, शनिबार १५:५० गते
रोल्पा, भाद्र २७
विगतको राज्यसत्ताले पछाडि पारेको रोल्पा जनयुद्धको तुफानी केन्द्र पश्चात् रोल्पाले विकासको गतिमा तीव्रता पाएको छ । यस्तै विकासको गति प्रदान गर्दै गएर आम रोल्पाली र रोल्पाको भावना सम्वोधन हुने आशामा नागरिकहरु बताउँदै आएका छन् । विगतको तुलनामा रोल्पामा सडक, सञ्चार, यातायात, खानोपानी, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अग्रगामी विकास नै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पछिल्लो चरणमा उर्जाको क्षेत्रमा अभै युद्धस्तरमै विकास भएको भन्दै नागरिकले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा करिव ९५ प्रतिशत रोल्पालीको घरमा बत्ति बल्ने भएको छ । यसले आम रोल्पालीको उज्यालोको क्षेत्रम खुशी हुने पक्का भएको छ ।
रोल्पा जिल्लामा अबको एक वर्षमा उज्यालो हुने आधारतयार भएको छ । रोल्पा जिल्लामा हाल करिव ५० प्रतिशत जनताले विद्युत उपभोग गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रोल्पाको तथ्याङ्क छ । रोल्पा जिल्लालाई उज्यालो बनाउनका लागि रोल्पा जिल्लाबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने वर्षमान पुनमगर (अनन्त) ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री बनेपछि यस्को ढोका खुलेको हो । रोल्पा जिल्लामा बजेट मात्रै आएन सही कार्यन्वयन सही तरिकाले भएपछि अभै रोल्पा उज्यालोले अभियानमाले पूर्णता पाउने भएको छ । रोल्पा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक बजेटबाट २९ करोडको टेन्डरबाट पोल गाड्ने, तार तान्ने, काम भइसहेको छ । सो योजनाबाट रोल्पा जिल्लाका अधिकांश गाउँ गाउँमा पोल र तार तान्ने काम सकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रोल्पाले बताएको छ । अब रोल्पाका धेरै स्थानमा टान्सफर्मरमात्रै जडानको लागि बाँकी रहेको छ । उक्त ठेक्का त्रिपुरेश्वरी कन्ट्रक्सनको उद्योग (आर.के.) कम्पनीले लिमिटेडले जिम्मेवारी पाएको थियो । लाईन र पोलहरु जडान भएको स्थानमा विद्युतको करेन्ट दिन बाँकी रहेको छ । सो कम्पनीले १०० केभीएको ३३ वटा, ५० के.भी.को ४३ वटा ट्रान्सफर्मर रोल्पामा आईसकेको छ । यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३२ करोडको ठेक्का रकमबाट २० वटा १०० केभिए, ३० वटा ५० केभिए ट्रान्सफर्मर नै आई सकेको छ । यस्तै गरी रोल्पा जिल्लाको विकासमा उज्यालोको विकासमा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा ४० करोडको टेण्डरको भइसकेको छ । बाँकी रहेकोकामलाई सम्पादन गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटबाट सम्पन्न गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ । रोल्पा जिल्लामा आगामी मंसिरसम्मा यी लाईनहरुमा विस्तार हुनेछन् । सो लाईन विस्तार भएमा रोल्पा जिल्लामा करिव ९० प्रशित जनताले विद्युत उपभोग गर्ने रोल्पा विद्युत प्राधिकरणका रोल्पाका केन्द्र प्रमुख श्यामकुमार शर्माले बताउनुभयो । उहाँले रोल्पा भन्नुभयोः–“रोल्पा जिल्लामा हाम्रो यी दुई वटा योजनाका काम पूरा भएमा जिल्लाका नागरिहरुले नै सेवा पाउनेछन् । हाल करिव ५० प्रतिशत रोल्पालीको पहँुचमा लाईन छ, त्यस योजनामा २०६÷०७७ को ४० करोडको टेण्डर यी सबै पूरा भएमा रोल्पा जिल्लाका ९० प्रतिशत जनताको पहुँच पुग्ने छ । यसले रोल्पा उज्यालो अभियानलाई पूर्णता दिनेछ ।”
यस्तै ऊर्जा, जलश्रोत सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनमगरले रोल्पा जिल्लामा भएको पत्रकार सम्मेलन सम्मेलनमा पनि हाल २० हजार ग्राहक भएका छन् भने अब २० हजार ग्राहक थपिनेछन् । करिव ९० प्रतिशत जनताले विद्युतमा पहुँच पु¥याने लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभएको थियो । उहाँले रोल्पा जिल्लाका नागरिहरुलाई नै सेवा दिने उद्देश्ले नै कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले रोल्पा जिल्लाका विपन्न वर्गलाई पनि सेवा दिनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ ।
रोल्पाका सबै घरधुरी र नागरिकालाई विजुली पु¥याउने योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण रोल्पाले रोल्पाले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनमगरको पहलमै कार्य अगाडि बढाई रहेको बताउँदै उहाँको प्रतिवद्धतालाई पूर्णता दिने गरी काम गरिरहेको कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रोल्पाका प्रमुख श्यामकुमार शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–‘माननीय ऊर्जा मन्त्री ज्यूको पहलमा नै रोल्पा र रोल्पालीलाई अध्यारोमुक्त बनाउने कार्यमा नै लागेका छौँ, यसलाई लक्ष्यमा पु¥याउने छाँै । यही बेला नै गर्ने हो, हामीले नै गर्ने हो । अब हामी मन्त्री ज्यूको साथ छ । हामी ढुक्क तरिकाले काम गरिहेका छाँै । ”
उहाँले रोल्पा जिल्लामा मंसिरसम्ममा विजुली बाल्नका लागि तयार गर्न सकिने भए पनि सडक भत्केको कारणले गर्दा नै अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँदै सडकको कारणले गर्दा सामान ढुवानीमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । सडक सुधारका लागि स्थानीयतहको सरकारसंग माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायी त्रिपुरेश्वर कन्ट्रसन उद्योग प्रा.ली. (आरके) प्रतिनिधी नारायण लम्सालले आफूहरुलाई बजेट कुनै पनि अभाव नभएको बताउँदै मन्त्री र कार्यालयको पहलमा पुरा नै भएको बताउँदै अब काम तिव्रतामा गर्नका लागि आफूहरु तयार भएको बताउनुभयो । आफूहरुले लिएको जिम्मेवारीलाई सही र समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा राम्रो हुने कुरा बताउनुभयो ।
रोल्पा जिल्ला परिवर्तन गाउँपालिका वडा नं. २ राङ्सीका चिजबहादुर बिश्वकर्माले कामले तिव्रता पाको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यस्तै माडी गाउँपालिका वडा नं. १ का अमरसिंह घर्तीमगरले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम युद्धको गतिमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । यस्तै गाम रोल्पाका रशेम बुढामगरले पनि आफ्नो वडामा बत्ति पु¥याउनका लागि तिव्रता पाएको बताउँदै मन्त्रीले गरेको पहलले रोल्पा जिल्लालाई सार्थकता पाउने बताउनुभयो ।
रोल्पा जिल्ला उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत अबको यसै आर्थिक वर्षमा रोल्पा उज्यालो हुने मन्त्री तथा नेताहरुको बोली र विद्युत प्राधिरण रोल्पाले गरिहेको काम अनुसार पुग्छ कि पुग्दैन । तर रोल्पा जिल्लामा भौगलिक विकता र बस्ती पाटलो भएकोले कम जनसंख्या एवं घर धुरीमा लग्न धेरै टाढा हुने भएको चुनौती थपिएको छ । सो चुनैतीको बीचमा पनि काम गरेमा सफलता भने पक्कै मिल्नेछ । रोल्पा जिल्लामा करिव गत आर्थिक वर्षसम्मा १ अर्बको लगानीले रोल्पा झिलिमिली बन्ने भएको छ । अब वाँकी कार्य सम्पादनका लागि जति बजेट आवश्यक पर्दछ त्यसको लागि ऊर्जामन्त्रीले व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभको छ । त्यसैले रोल्पा जिल्लाको नागरिकहरु खुशी बन्ने भएका छन् । त्यससँगै माडी जलासययुक्त आयोजना पनि तिव्र रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । त्यो कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको छ । यसले रोल्पाको समृद्धीमा इट्टा थप्ने छ । रोल्पा जिल्लाको करिव ५ वर्षमा विद्युतीय क्षेत्रको सेवा विस्तारलाई तीव्रता र युद्धस्तरमा विकासको गति पैदा भएको प्रमाणित नै हुन्छ । त्यसरी नै आगामी दिनमा पनि गरी रोल्पा र रोल्पालीलाई उज्यालो बनाउनुपर्दछ की ?